समानता र सशक्तीकरणको अर्थ - बहस - नारी
समानता र सशक्तीकरणको अर्थ
समानता र सशक्तीकरण पर्यायवाची शब्द हुन् तर हाम्रो समाजमा यसको महत्व र अर्थमा विरोधाभास छ । सशक्तीकरणको अर्थ पुरुषसरह हुनु होइन भने समानता भनेको महिलाले पुरुषले गरेजस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । वास्तवमा सशक्तीकरण र समानता के हुन् त भन्ने विषयमा यसपटकको नारी बहस :
स्थान : विमिन एक्ट, रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धता, टंगाल, भाटभटेनी
सिर्जना अधिकारी, अधिकारकर्मी, युवा नेतृ
यी शब्दले आफैंमा महिलालाई सबल, सक्षम, आत्मविश्वासी भएर अघि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गराउने खालका छन् वास्तवमा त्यही नै सशक्तीकरण हो । आफूलाई हरेक कोणबाट योग्य बनाउनु नै सशक्तीकरणको अर्को परिभाषा हो । व्यक्ति, स्थान, संस्कृति र अवस्थाले पनि यसको परिभाषा फरक हुन सक्छ । अहिलेको समयमा समानता भन्ने मुद्दा शब्दको खेल भैरहेको छ । पुरुषले जे गर्छन् त्यही गरेमात्र समानता हुन्छ भन्ने सोच र परिभाषा पनि पाइन्छ समाजमा, तर एउटी महिलाले बच्चा जन्माउँछिन् तर पुरुषले जन्माउँछन् त ? परिवार र राज्यले दिने सेवा, अवसर तथा जिम्मेवारी बराबर रूपमा बाँडफाँड हुनु नै समानता हो । आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूपमा समान हुनुपर्‍यो । राज्यले गर्ने व्यवहारमा समानता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । अंश–वंशको अधिकार समानताको अधिकारको मेरुदण्ड हो । अब घरका स–साना काममा समानता भएन भनेर अड्किएर बस्नु हँुदैन ।
जेष्ठ २१, २०७३ - नि:शुल्क शिक्षाको अर्थ के हो ?
चैत्र २, २०७० - साँचो सशक्तीकरणको